सिण्डिकेट हटेपछिको प्रभाव : एसी बसमा सरर...
विकाश पराजुली बुटवल, २३ भदाै
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिण्डिकेट (एकाधिकार) हटाउनुअघि बुटवल, भैरहवा तथा पश्चिम क्षेत्रमा तत्कालीन पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ (हालको प्रा.लि.) रूपन्देहीको ‘राज’ चल्थ्यो । पूर्वबाट आउने बसहरूले बर्दघाटमा ढोका बन्द गरेर कपिलवस्तुको ४ नं. पुगेर ढोका खोल्थे भने पश्चिमबाट आउने बसले पनि कपिलवस्तुको ४ नं. बाट बर्दघाटसम्म ढोका बन्द गर्थे ।
ढोका बन्द नगरे पश्चिम नेपाल बस व्यवसायीका सदस्यहरू उनीहरूमाथि जाइलाग्थे । कारण, त्यहाँका यात्रुहरू अरुले लैजान नपाऊन् भन्ने थियो । त्यति मात्रै होइन, नाकाबन्दीको समयमा पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघले बुटवलमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई ई–रिक्सा दर्ता नगर्ने व्यहोराको पत्र पठायो । पत्रको सांकेतिक अर्थ हामीले मात्र यात्रु ओसारपोसार गर्ने हो भन्नु नै थियो । तर, अहिले परिस्थिति त्यस्तो छैन ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिण्डिकेट (निश्चित यातायात व्यसायीको एकाधिकार) हटेसँगै यस क्षेत्रमा स्तरीय गाडी भित्र्याउने होड चलेको छ । गत वर्ष वैशाखमा सरकारले यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि जारी सिण्डिकेट हटाएसँगै यस क्षेत्रमा प्रालिमार्फत यायातात समिति दर्ता भएर ठूला सार्वजनिक यातायातका सवारी भित्र्याउने प्रतिस्पर्धा गरेका हुन् । जसको फाइदा यात्रुलाई हुने देखिएको छ । यी गाडीले नर्मल गाडीले भन्दा २० प्रतिशतसम्म बढी भाडादर लिन पनि पाउनेछन् । स्थानीय रूटमा चल्ने तयारी गरेका नयाँ गाडीमा दुईवटा ढोका रहेका छन् । पछाडिबाट चढ्ने यात्रुलाई अगाडिबाट ओरालिनेछ । यसका लागि गाडीमै डिजिटल टिकेटिङ, आफ्नै सिटमा रहेको अलारामले आफू झर्ने ठाउँमा गाडीलाई रोक्न सकिनेछ । लुम्बिनी मेट्रोसिटी प्रालिका अध्यक्ष धनबहादुर अधिकारीले यात्रुहरूको सुविधालाई मध्येनगर गर्दै एसी बसहरू भित्र्याएको बताए ।
थपिँदै छन् स्तरीय सवारीसाधन
सिण्डिकेट अन्त्य हुनुअघि एकछत्र ‘राज’ गरेको पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रा.लि.ले अहिले स्तरीय बसहरू थपिरहेको छ । भैरहवा–काठमाडौं दैनिक १० क्यू एसी बसहरू अहिले पश्चिम नेपालका चल्दै आएका छन् । त्यसबाहेक बुटवल–भैरहवा रूटमा ११ वटा एसी बसहरू पनि कम्पनीले थपेको छ । पश्चिम नेपाल बस व्ययवसायी प्रालिका महासचिव जीवनकुमार बञ्जाडेका अनुसार यस पटकको दसैंबाट देशका विभिन्न रूटमा चल्ने गरी करिब ५० वटा एसी बसहरू तयार हुन लागेका छन् ।
‘अहिले भैरहवा–काठमाडौं चल्ने एसी बसहरू फर्कंदा विभिन्न जिल्लामा पुगेका छन्, दसैंपछि हाम्रा एसी बसहरू अझ दुर्गममा समेत पुग्नेछन्,’ उनले भने ।
त्यसैगरी, भिजन लुम्बिनी टुर्स एण्ड ट्राभल्सले लुम्बिनी भ्रमण वर्षको अवसर पारेर गएको जेठ ४ गतेबाट बुटवल–भैरहवामा एसी बसहरू सञ्चालन गरेको छ । ट्राभल्सका अध्यक्ष जगत पोखरेल प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर बुद्ध सर्किटमा पनि एसी बसहरू चलाउने योजना बनाएको बताए । उनले स्थानीय रूटमा चल्ने एसी बसमा ई–टिकेटिङको तयारी पनि गरेको बताए ।
उता सिद्धार्थ यातायात प्रालिले पनि बुटवल–भैरहवा रूटमा एसी बस सेवा शुरू गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष सूर्यकुमार सारूका अनुसार ४ वटा एसी बसहरू अहिले सञ्चालनमा छन् । उनले अर्को वर्ष लामो दूरीमा एसी बसहरू सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको समेत बताए । ‘हामीले शुरुवाती चरणमै छवटा एसी बसहरू सञ्चालन गर्ने भनेका थियौं, ४ वटा आए, अझै २ वटा आउन बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘अर्को वर्षदेखि भैरहवा–काठमाडौं, भैरहवा–पोखरा र बेलहिया–काँकडभिट्टा रूटमा एसी बस सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं ।’
त्यस्तै, बुटवलस्थित लुम्बिनी मेट्रोसिटी प्रालिले एक वर्षअघिदेखि बुटवलदेखि बर्दघाट, तौलिहवा, कृष्णनगर, लुम्बिनी, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, रानीमहल र बर्दघाट रूटमा ४५ सिट क्षमताका १५ वटा एसी बस सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
चर्को गर्मीमा एसी बस चल्दा यात्रु खुसी
बुटवल, भैरहवा क्षेत्रमा अहिले पनि साना २२ सिट क्षमताका माइक्रो बस चल्दै आएका छन् । जुन गाडीमा न उभिन मिल्छ, त्यसमा पनि घुँडा ठोक्किने भएकाले यात्रुले सास्ती खेप्दै आएका छन् । ‘सानो माइक्रोमा चढ्दा बस्दा खुट्टा ठोक्किने, उठ्दा टाउको ठोक्किने हुन्थ्यो, तर अहिले ठूला र स्तरीय बसहरू चल्दा धेरै सहज भएको छ,’ कान्ति माविकी विद्यार्थी रचना गौतमले भनिन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २३, २०७६, ११:४२:००
प्रदेशको नाम मगरात हुनुपर्ने भन्दै चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा
शिवरात्रिका लागि झकिझकाउ हुँदै सिद्धबाबा
पढ्दै कृषि पेसामा रमाएका श्याम पाल